सत्य बोल्न केको डर? कामुक प्रस्तोता सोनिका रोकायाले खोलिन् अर्को वास्तविकता -भिडियो सहित - Enepalese.com
सत्य बोल्न केको डर? कामुक प्रस्तोता सोनिका रोकायाले खोलिन् अर्को वास्तविकता -भिडियो सहित
इनेप्लिज २०७४ कार्तिक २३ गते ९:३० मा प्रकाशित
पछिल्लो समय विभिन्न सेलिब्रेटिहरुको अन्तर्वार्ता लिँदा लिँदै आफै सेलिब्रेटी सरह बन्न पुगेकी सोनीका यति बेला नेपालि मिडियामा निक्कै चर्चित छिन्। उनका भिडियो र उनले लिएक्लो अन्तर्वार्ताहरु दिनानु दिन नेपाली युटुबहरुमा उच्च ट्रेण्डमा देख्न सक्छौं।
बढि मात्रामा कामुकता झल्काउने खालका अन्तर्वार्ता लिन माहिर सोनिकालाई यति बेला युटुबमा सर्च नगर्ने कमै होलान्। वाउ नेपालकी प्रस्तोता उनि मेरो एफ एममा पनि कार्यक्रम संचालिकाको रुपमा सक्रिय छिन्।
अन्तर्वार्ता लिंदा होस् या दिदा सधै फरक मत राखेर बोल्ने उनको शैलीले उनि नेपाली मिडियामा अझ बढि चर्चित हुन पुगेको हो। हालै उनि संग लिएको एउटा अर्को अन्तर्वार्तामा निक्कै फरक अभिव्यक्ति दिएकि छिन्।